Sida loo Isticmaalo Safarada Safari ee iPhone ama iPod taabasho
Browsers Browserada gacanta
Tababarkan waxaa loogu talagalay oo kaliya loogu talagalay dadka isticmaala iPhone iyo iPod ee isticmaalaya iOS 8 ama ka sareeya.
Waxay ahayd sanado badan kahor in kordhinta ay ahaayeen muuqaal cusub, kor u qaadidda shaqeynta shabakadaha internetka ee siyaabo badan. Waqti ahaan, horumariyayaal firfircooni ah ayaa bilaabay inay riixaan xuduudaha marka laga eego waxa ka mid ah waxyaabahan ay ku kordhin karaan. Waxa bilowday barnaamijyo yaryar oo leh qaab fudud oo sahlan si dhakhso ah waxay noqotey caqabado adag oo kakooban oo si dhab ah u qaada awoodda shabakadda ee dhererka cusub.
Maadaama ay isticmaalayaal badani bilaabaan inay eegaan qalabkooda la qaadan karo, waxay u muuqataa sida koritaanka dabiiciga ah ee kordhinta si ay u helaan jidka muraayadda gacanta. Caddaynta arrintan ayaa laga heli karaa nidaamka Apple ee nidaamka hawlgalka, halkaas oo dheeraad ah iyo in ka badan oo dheeraad ah ay noqdaan kuwo diyaar u ah browser-ka default.
Casharadani waxay sharaxaad ka bixineysaa sida Safariinta Safari ay uga shaqeeyaan iPhone iyo iPod touch, oo ay ku jiraan tilmaamo ku saabsan sida loo kiciyo iyo loo isticmaalo.
Marka hore, fur browserka Safari. Ku dheji badhanka badhanka barta Share , oo ay ku taal muraayad ay ku jirto okaan kor ku qoran oo ku yaala xagga hoose ee daaqadaada daaqada.
La wadaag sawirka
Kordhinta Browser ee Ikhtiyaarka ah waxoogaa ka duwan sida laga yaabo inaad u isticmaasho PC ama Mac. Marka hore, laguma soo dejiyo oo lagu rakibay qalabyo asaasi ah maadaama ay ku jiraan miiska shaqada. Kordhinta korontada waxaa lagu dhejiyaa barnaamijyadooda kala duwan, la rakibay, laakiin had iyo jeer ma aha mid firfircoon .
Ma aha oo kaliya inta ugu horreysa curyaamiinta, joogitaanka wadiiqooyinkan si cad looguma soo wicin - macnaheedu waa barnaamijyadooda u dhigma ee aan si joogta ah u xayeysiinin jiritaanka waxyaabahan faa'iidooyinka leh. Waxaa jira hab sahlan oo lagu arki karo dhammaan kordhinta la heli karo Safari, si kastaba ha ahaatee, iyo sidoo kale in ay u kala beddesho banaanka.
Mishiinka popup loo yaqaan 'Screen Shield' waa in hadda la arki karaa. Safka koowaad iyo kan labaad waxaa ku jira naqshado kordhin app ah oo hore u awoodey iyo sidaas darteed waxaa heli kara browser Safari. Safka ugu horeeya waxa ku jira kuwa lagu sifeeyey Faa'iido la wadaago, halka labaadna wuxuu soo bandhigaa ficilada waxqabadka la heli karo. Ku dhaji dhinaca midig ee safkan iyo dooro badhanka badhanka.
Shaashadda hawluhu waa in hadda la soo bandhigo, liiska dhammaan dariiqyada la wadaago oo hadda lagu rakibay qalabkaaga. Si aad u aragto faahfaahinta la kordhiyey ee la rakibay, dooro badhanka kale ee laga helo safka udhaxeeya. Sida aad u ogaan karto dhowr qof oo kale ayaa lagu rakibay sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, marwalba ma awoodaan, sidaas daraadeedna ma ahan inay galaan browserka.
Si aad udhaqaajiso xayeysiiska korriimada, xulo badhanka midigta magaciisa illaa uu ka cagaarayo. Si aad u joojiso kordhinta, si fudud u dooro badhanka isku midka ah ilaa ay cadaanayso.
Waxaad sidoo kale bedeli kartaa mudnaanta dheeriga ah, sidaas darteed meesha uu ku yaal Safari ee Shaashadda Share, adoo dooranaya oo jiidaya liiska ama hoos ku qoran.
Si aad u bilowdo kordhin gaar ah, si fudud u dooro astaanta asaasiga ah ee ka muuqda shaashadda la wadaago.
Qalabka Dolphin Browser ku samee iPad, iPhone iyo iPod touch
Ugu sareeya 8 iPad Browsers
Sida Loo Beddelo Mashiinka Baaritaanka Ugu Badan ee Chrome ee loogu talagalay iOS
Furaha Password-ka ee kumbuyuutarka ee iPhone iyo iPod taabashada
Sida loo Isticmaalo Tusmada Liiska Akhriska ee Firefox ee loogu talagalay iOS
Sida Loogu Helo Ruqsad-bixiyeyaasha Online
10 ka mid ah Mudanayaasha Ugu Wanaagsan ee Macaamiisha ah ee Moobaylka ah
TCL wuxuu ku dhawaaqay Khadka Telefishinka Roku ee loogu talagalay 2015
Ilaah Caymiska Khiyaamada Dagaalka iyo Habka Ilaah ee loogu talagalay PS2
Abuuritaanka Khariidadda Khariidada
Sidee Cilmi-nafsiga Cilmiga ah u saameysaa Naqshadeynta Blog
Talooyin degdeg ah si aad u horumariso App Medical App ee iPhone ah
Sida Loo Xadeeyo Yahoo! Emailka Spam ee Mac OS X Mail
"SimCity 4": Nidaamka Waxbarashada
Mashiinka Kabaha ama Wireless?
Sida Ogeysiiska Riixka ula shaqeeyaan VoIP
Maqnaanshaha Excel Rolling Dice
'Def Jam Jam Fight for NY: Qaadashada' Cheats 'ee PSP
Sidee loo tirtiraa ciyaaraha iyo barnaamijyada Nintendo 3DS
Barnaamijyada loogu talagalay fariimaha qoraalka bilaashka ah
Tartanka Isboortiga Khaaska ah ee Dabbaasha
Qalabaynta Mac Toolka Finder Toolbar
Sidee loo soo diri karaa iPhone Boostada Kootada kala duwan